Thet Htoo's: ကချေသည်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့် အတိတ်ဘ၀
ကချေသည်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့် အတိတ်ဘ၀
ကိုယ့်ရဲ့ အတိတ်ဘ၀က ဘယ်လိုဘ၀များ ဖြစ်သလဲဆိုတာ သိချင်ကြမှာပဲဗျာ။ ကျွန်တော်ကတော့ အတိတ်ဘ၀မှာ ကချေသည်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ တကယ်ပါ။ မယုံရင် အပေါ်က ပုံကိုကြည့်ပါ။ အဲဒါ ကျွန်တော့်ရဲ့ အတိတ်ဘ၀ကို ပုံဖော်ရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားလေးပါဗျာ။ ကျွန်တော် ကချေသည်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ဘ၀မှာ ပရိသတ်ကို ကကြိုးကကွက် စုံလင်ဆန်းပြားစွာနဲ့ အာရုံတွေကို ဖမ်းစားဖို့ အချိန်အများကြီး ပေးပြီး လေ့ကျင့်ခဲ့ရတာပါ။ ဒါ့အပြင် အခြား ကချေသည် လက်သစ်လေးတွေကိုလည်း သင်တန်းပို့ချရင်းနဲ့ပဲ အချိန်ကို ကုန်လွန်ခဲ့ရပါတယ်။
ဘလော့ဂ်ဖတ်ပရိသတ်များလည်း ကိုယ့်ရဲ့ အတိတ်ဘ၀ကို ဘယ်လိုများလဲသိချင်ရင် ကျွန်တော် နည်းပေးလမ်းပြ လုပ်ပါ့မယ်ခင်ဗျာ။ ပြီးရင်တော့ ကျွန်တော့်ဆီကို ပြန်လာပြီး ဘယ်လိုဘ၀က လာခဲ့တယ်ဆိုတာ ပြန်ပြောပြဦးပေါ့ဗျာ။ အရင်ဘ၀မှာ ချစ်ခင်ရင်းစွဲ ရှိပြီးသား သူတွေနဲ့လည်း ဒီဘ၀မှာ ဆက်ပြီး ချစ်ချစ်ခင်ခင် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နေသွားချင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အရင် ဘ၀က ငြိုးသူရန်ဘက်တွေဆိုရင်လည်း ဒီဘ၀ကစလို့ နောင်ကို ဘယ်တော့မှ မုန်းအောင်လုပ်သူ၊ အမုန်းခံရသူ မဖြစ်ပါရစေနဲ့တော့ဗျာ။
အဲဒီမှန်လေးကို ကြည့်ပြီး အောက်မှာ ပြထားတဲ့ စကားလေးတွေ ပြောပေးပါ။ အလေးအနက်တော့ ထားပါဗျာ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အလေးအနက် မဟုတ်ပဲ အပြောင်အပျက်မေးရင် အဖြေမှန်မှာ မဟုတ်လို့ပါ။ စာသားလေးကို ရွတ်ပြီးရင်တော့ မှန်လေးပေါ်မှာ ကလစ် တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရုံပါပဲ။ အဲဒီမှန်လေးက သင်ဘယ်ဘ၀က လာတယ်ဆိုတာ ပြောပြပါလိမ့်မယ်။
`` ငါ့ရဲ့ ရှေ့က ကြေးမုံလေး၊ ဘာတွေ့သလဲ အဖြေပေး။
ဟို ရှေးရှေးက ငါ့ဘ၀ဟာ၊ ဆင်းရဲ ချမ်းသာ သိချင်တာ။
မြန်မြန်လေးတော့ ပြောပါဗျိုး၊ ကွန်နက်ရှင်းက လိပ်ထက်ဆိုး။
ပြောပါ ပြောပါ မှန်လေးရာ၊ ငါ့ရဲ့ အကြောင်းကို ပြောပါကွာ။ ´´
ရေးသူ = Thet Htoo@Myat Lone | ရေးသားချိန် = 3:59:00 AM
| ကဏ္ဍ = Online Stuff
English-Myanmar Online Dictionary Links
Myanmar Online Directories
Yellow Pages Myanmar (.net)
Myanmar Yellow Pages
Myanmar Telphone Directory (com.mm)
Myanmar Directory (.net)
Mandalay Directory (.com.mm)
Ah Nge (2)
Aung Lan (1)
Birthday Wish (3)
Business Processing (1)
Customzing Blog (6)
Dala Water Donation (1)
Digital DJ Software (1)
Fire Garden (1)
Firefox Add-on (1)
Handy Myanmar Youths (7)
Hardware Info: Tools (1)
HMY Update (2)
Humanitarian Info (1)
Lay Phyu (2)
Mg Mg Zaw Latt (1)
Money Making with Blog (1)
morphing photo (1)
Movie Sountrack (1)
Myanmar Marketing Committee (1)
Myanmar Photographic Society (1)
Myanmar Website (1)
Myo Gyi (1)
O Brother (1)
Online Stuff (14)
Portable Browser (1)
St. Anger (1)
Tha Yet (1)
The Ants (1)
web show 2008 (1)
Where art thou ? (1)
Yangon Computer and accessories price (1)
ဘောင်းဘီဝတ် မျက်လုံး (သို့မဟုတ်) ဘာလုပ်နေလဲ မောင်မ...
Living onaprayer by Bon Jovi
ရွှေသွေးထဲက Relativity Theory